Konke malunga nokuDada ngokuNciphisa | Ulwazi oluluncedo kuye wonke umntu
Ukuqubha kufanelekile kwimisebenzi yomzimba. Enkosi ngokuqubha, unokuphucula ukhuseleko, ukhawuleze ukuguga, kwaye uphucule ithoni yomzimba wonke. Ubume obugqwesileyo bomzimba, izihlunu ezinethoni, imo elungileyo kunye nokugqabhuka kwamandla luluhlu nje oluncinci lwezinto ezintle.
Ukuncipha kobunzima bokuqubha akunakuphikwa. Kulula kwaye kuyonwabisa ukunciphisa umzimba ngelixa uphucula impilo iyonke.
Iinyani ezinomdla malunga nokudada
Nokuba ulele phezu kwamanzi, umntu unokuncipha. Ukuqubha okusebenzayo, kwelinye icala, ayitshisi iikhalori kuphela, kodwa iyanceda ukomeleza izihlunu. Kungenxa yoko le nto ukudada kufuneka kufakwe kwirejimeni yoqeqesho lwakho.
Xa uqubha, imetabolism ikhawuleza kakhulu. Kwaye ukukhawulezisa imetabolism, njengoko sisazi, kunegalelo ekunciphiseni ubunzima.
Ngokungafaniyo noqeqesho kwindawo yokuzivocavoca, ngelixa sidada, asizukuzolula kunye nokugcwala kwezihlunu.
Xa sidada, umzimba wethu usebenzisa izihlunu ekunzima kakhulu ukuba zisebenze nangayiphi na indlela.
Ukuzivocavoca emanzini kulula kakhulu kunasemhlabeni. Ke ngoko, asizukuziva umthwalo onzima ngexesha ukuqubha... Kwaye izihlunu ziya kulayishwa kakhulu kwaye ngokufanelekileyo.
Ukuqubha kuyasebenza kakhulu ekulweni "ne-orenji yexolo". Ngokuqubha, siyoyisa ukuxhathisa kwamanzi. Ke, siphucula ukuhamba kwegazi kwaye asiziniki izicubu ezinamanqatha ithuba elinye lokufakwa kwifom ye-cellulite engeyomfuneko.
Ukuqubha ngokufanelekileyo kuphucula ithoni yolusu. Iyanda ngakumbi, iyajiya, ithambile. Emva kokundwendwela iphuli, unokufumana umbono wokuba siye kumassage.
Ukuqubha komeleza inkqubo yentliziyo, kuzinzise uxinzelelo lwegazi, kwenyuse izinga lehemoglobin egazini, kwaye komeleza amajoni omzimba.
Ukuqubha njani ukunciphisa umzimba?
Ukuba awuzange utyelele echibini ngaphambili, ke kungcono uqale ngokuthe ngcembe. Kufana nawuphi na umdlalo. Ukwanda ezibukhali umthambo ayinqweneleki emzimbeni.
Ekuqaleni, unokudada imizuzu engama-30, hayi kakhulu kwaye ingekuko imigama emide. Emva kweentsuku ezimbalwa, ungazisa ixesha lokuhamba ngenqanawa ukuya kuthi ga kwiyure.
Kungcono ukudada kusasa okanye ngokuhlwa
Ngentsasa, umzimba wethu ukhululekile kwaye unokuchaphazeleka lula kuxinzelelo. Kwaye siqinisekisiwe ukonyusa amandla imini yonke. Kwaye ngokuhlwa siya kutshisa iikhalori ezizuziweyo emini. Esi siphumo sinokuqiniswa nesondlo esifanelekileyo emva koqeqesho. Kodwa nantsi yonke into ixhomekeke kumntu ngamnye, ke mamela umzimba wakho kwaye ulandele imiyalelo yawo.
Kuba ubunzima bomzimba womntu buncitshiswe kakhulu emanzini, ukuqubha kulungele abantu abatyebe kakhulu. Ukuqubha kufanelekile nakwabo bachasene nomsebenzi omkhulu womzimba. Ngapha koko, udla ngokuva ukuba oogqirha bayalela umntu ukuba enze naluphi na uhlobo lomdlalo ngenxa yeengxaki zamalungu okanye umqolo. Ukuqubha sisisombululo kwingxaki.
Yintoni efanele ibe kukuzozela kwakho?
Ukuqubha kufuneka kwenziwe rhoqo. Njengakuwo nawuphi na umdlalo, ukusebenza ngo-3-4 ngeveki kufanelekile. Ixesha lokuqubha kunokunyuka ngokuthe ngcembe ukuya kwiyure. Kodwa izibonelelo zokudada zokwehla kobunzima ziya kuba kuphela xa ukuzilolonga kubanjwe ngesantya esiphezulu. Ukuba ulele nje emanzini kangangeyure, umphumo uya kuba mncinci.
Ukomeleza ngokubanzi ukusebenza komzimba kuya kwenzeka. Kodwa ukuze ulahle amanqatha omzimba, kusafuneka uzame. Ukwenza oku, unganamathela kwesi sikimu silandelayo: i-70% yoqeqesho olukhulu, ukuphumla kwe-30% kunye nokuchacha.
Ibhabhathane, isifuba kunye nokugaqa zithathwa njengezitayile zokuqubha ezifanelekileyo. Kulungile ukudada esifubeni sakho, ugcine inkxaso phambi kwakho. Oku kuya kusinceda siqinise izihlunu zeengalo kunye nemilenze, someleze i-abs, sisebenze amacala kwaye siqonde "ukuma". Ewe, ukuqubha kunesiphumo esihle kumqolo. Ke ngoko, abo bafuna ukuyilungisa kufuneka batyelele echibini.
Qinisekisa ukufudumeza umhlaba ngaphambi koqeqesho. Nika le nkqubo kuphela imizuzu emi-5 ukuya kweli-10, emva koko ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza koqeqesho kuya kunyuka ngokubonakalayo. Unokuqesha umqeqeshi oya kuthi enze inkqubo yoqeqesho efanelekileyo kakhulu kuwe. Kwaye uya kujonga nokuchaneka kwendlela ehanjisiweyo.
Umqeqeshi uya kukucebisa ukuba loluphi uhlobo lokuqubha ukuze uchaphazele indawo yakho yengxaki. Ubungqongqo bokuzilolonga bubaluleke kakhulu. Okukhona usiya emanzini, kokukhona uya kukhawuleza unciphise umzimba. Kwaye ukubaluleka kwesondlo esifanelekileyo akunakuphikwa.
Ukudibanisa konke oku, uya kufezekisa iziphumo ezimangalisayo ngexesha elifutshane. Qubha ngolonwabo kwaye unciphise umzimba!
Ukuzivocavoca i-AB kunye neebhokisi: indlela yokufumana ukugqwesa
Isupersets yimithambo yomzimba wonke. Ukusebenza kokutshisa amafutha ekhaya
Ukomisa isisu. Ungasifezekisa njani isisu esisicaba?
Eyona ndlela isebenzayo - ukubhukuda kwebhabhathane
Edlulileyo Ukutya kwaseBrazil-ukunciphisa umzimba ngokulula
Okulandelayo I-cocktail ngee-clove
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,787.